အကြိုက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » အကြိုက်များ
Posted by zoxnet on May 1, 2010 in Drama, Essays.. |5comments
လူတိုင်း လူတိုင်းတွင် ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ အကြိုက်တစ်မျိုးစီ ရှိကြဧ။်။ ထို အကြိုက်များအား အချို့သူတို့ အမှန်တကယ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရဧ။်။ အချို့သူတို့မှာမူ စိတ်ကူးထဲတွင်သာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါဧ။်။ ကျွန်တော်သည် အချို့ကို တကယ်ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ရပါဧ။်။ အချို့ကို စိတ်ကူးတွင်သာ ပိုင်ဆိုင်ရပါဧ။်။ အချို့ကိုမူ ပိုင်ဆိုင်ပြီးမှ စွန့်လွှတ်ခဲ့ ရပါဧ။်။
ကျွန်တော် ကြီးပျင်းရှင်သန်ခဲ့ရာ ကျွန်တော်တို့ မိသားစု နေထိုင်ခဲ့သော နေအိမ်ကြီးကို ကျွန်တော် အလွန် ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ပါ၏။ ကျွန်တော့်အား မိဘများနှင့် အတူ ကြည်နူးနွေးထွေး မှုကို ပေးသော ထိုအိမ်ကြီးကို ကျွန်တော် အလွန် သံယောဇဉ် ရှိခဲ့ပါ၏။ ယနေ့ထက်တိုင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ယခုနေ့ အခါတွင်မူ ကျွန်တော် ထို အကြိုက်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရ၏။
ကျွန်တော်အား ၁၄ နှစ်သား အရွယ်မှပင် ကားမောင်းကျွမ်းကျင်မှု အတတ်ပညာကို သင်ပေးသော ကျွန်တော်တို့၏ 230 E Mercedes Benz ကားကြီးကို ကျွန်တော် အလွန်ကြိုက်ခဲ့ပါ၏။ မွေးချင်း တစ်ယောက်သဖွယ် ပြုမူ ဆက်ဆံခဲ့ပါ၏။ ကျွန်တော့် အပေါ် အနွံအတာ ခံလွန်းသဖြင့် သနားလည်း သနားခဲ့ပါ၏။ သို့သော် ယခုအခါတွင်မူ တပါးသူလက်ထဲတွင် အရောင်ပြောင်းကာ ကျွန်တော်နှင့် ဝေးကွာခဲ့ပါ၏။
ကျွန်တော်နှင့် ပထမအိမ်ထောင်ကျ ခဲ့သော Pentium3Desktop Computer Set လေးကို ကျွန်တော် နှစ်သက်မြတ်နိုးခဲ့ပါ၏။ သူ့အရှေ့တွင် အချိန်ပြည့် နီးပါးထိုင်ချင်ခဲ့ပါ၏။ သူ့အကြောင်းများသာ စဉ်းစားနေချင်ပါ၏။ ယနေ့ သူ့ကိုစွန့်ကာ ကျွန်တော် ဒုတိယ အိမ်ထောင်ကျ ခဲ့ပါ၏။
ကောင်မလေးကို ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်ပါ၏။ ကျွန်တော်၏ ဘ၀လက်တွဲဖော် ဖြစ်ပါ၏။ ကျွန်တော်၏ ၀ိညာဉ်တခြမ်း ဖြစ်ပါ၏။ ကျွန်တော့် အပေါ် အနွံအတာ ခံသောသူ ဖြစ်ပါ၏။ သူ့ကို ချစ်နေရင်းဖြင့်ပင် ကျွန်တော် သေချင်ပါ၏။ သို့သော် တချိန်က သူနှင့် တူတူသောက်ခဲ့သော ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လုံး အလွန်ကြိုက်နှစ် သက်ခဲ့သော ကော်ဖီပူပူလေးများကို ကျွန်တော့်၏ အစာအိမ်ရောဂါကြောင့် ယနေ့ ကျွန်တော် စွန့်လွှတ်လိုက်ရပါတော့၏။
မောက်စ် ကြောင်နေလို့ အစ်ကိုရေ။ ကျေးဇူးပါ။ သတိမထားမိဘူး။ အဟီး။
ကျနော်ကတော. အကြိုက်တွေများနေလို. ပြောရတောင်ခက်နေတယ်။
အီး.. ဒါဆို လက်ညှိုးကြိုက် ကြီးပေါ့။ အရမ်းမထိုးနဲ့။ အင်္ဂုလိမာလ တွေ့သွားဦးမယ်။ အဟီး။